Izindleko zamasheya HAINAR Hydraulics CO., Ltd.
saqala ukwenza okokufakwa kwepayipi le-hydraulics, ama-adaptha kanye nokuhlanganiswa kwepayipi le-hydraulic hose ngo-2007, Uhlu lomkhiqizo wethu kanye nomugqa oyinhloko womkhiqizo owokufakwa kwe-High-pressure hydraulic kanye nokuhlanganiswa kwepayipi.
Ngemuva kweminyaka eyi-14 yokuthuthuka, i-HAINAR Hydraulics yaba nedumela elihle kumakhasimende asekhaya namakhasimende aphesheya kwezilwandle. Sinikezela ngokuhlanganiswa kwepayipi le-hydraulic high-pressure hose kanye nokufakwa efektri yemishini emakethe yasekhaya. Okufana nomshini wokubumba umjovo, umshini wokwakha, imishini yezimayini kanye nomshini wokumba Izinsiza Zokudoba zomkhumbi njll. Manje sesinamaphesenti angu-40 okufakwa kwepayipi le-hydraulic hose, ama-adaptha kanye nama-couplings asheshayo e-hydraulic athunyelwa eNtshonalanga Yurophu, eMpumalanga Yurophu, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika. kanye neSouth East Asia.
I-HAINAR Hydraulics iqhubeka ithuthukisa futhi ithuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo yayo. Umhlangano kanye nokwedlula isicelo sekhasimende emhlabeni wonke.
I-HAINAR hydraulics enomqondo olula we- “Quality First, Customer First”. Nikeza ikhasimende lethu intengo enengqondo kakhudlwana, Ikhwalithi Ephakeme kanye nesikhathi Sokulethwa Ngokushesha.
Hlala Unamathele Ku
Ikhwalithi yomkhiqizo eyingqayizivele enezintambo zomshini ze-CNC ezinembayo, izinombolo eziyingxenye ye-laser-inked, namakhodi okukhohlisa ukuze alandeleke.
Ububanzi bokusungula nokujula okungenakuqhathaniswa - ukutshalwa kwezimali okuqhubekayo ku-inventory kuqinisekisa ukuthi sizoba nengxenye oyidingayo esitokweni futhi silungele ukuthunyelwa namuhla.
Ukuhlinzeka ngamaleveli esevisi aphakeme kakhulu nokusekelwa kobuchwepheshe ukuze siqinisekise ukuthi amakhasimende ethu athola ingxenye efanele, ngesikhathi esifanele, ngaso sonke isikhathi. Wonke ama-oda atholwe ngaphambi kwehora lesi-3 ntambama ngomkhumbi omaphakathi ngosuku olufanayo.
Amandla wokwenza imishini yasendlini kanye nokushisela ukwenza izingxenye ngokwezifiso ezicaciswe yiklayenti.
Ukuhlola okuqhume kwepayipi lasendlini kufika ku-24,000 psi kanye nomklamo/ukwenziwa kwethumbu langokwezifiso kuzicaciso zakho ozicelile.
Sizosekela umoya webhizinisi wekhasimende kuqala, ikhwalithi kuqala nobuqotho obusekelwe, futhi sizoqhubeka sizinikele ekuthuthukiseni ukucubungula okujulile kwengilazi nokukhiqizwa ngobuningi. Sihlala sihlinzeka amakhasimende ethu ngemikhiqizo Eseqophelweni eliphezulu kakhulu namasevisi asebenza kahle kakhulu ngobuchwepheshe obuchwepheshile nezintengo ezifanele. Ngakho Siyakwamukela amakhasimende asekhaya nawakwamanye amazwe ukubambisana nathi ngobuqotho.